1. Inona ny Oleoylethanolamide (OEA)? Oleoylethanolamide (OEA) dia mpandrindra voajanahary amin'ny lanjany, kolesterola ary ny fahazotoan-komana. Ny metabolite dia mifangaro amin'ny habetsahan'ny tsinay kely. Ny molekiola voajanahary dia tompon'andraikitra amin'ny fahatsapana ny fahafenoana aorian'ny fihinanana sakafo. Oleoylethanolamide dia manampy amin'ny fifehezana ny tavy amin'ny alàlan'ny famatarana ny alpha receptor activated activated peroxisome alpha (PPAR-Alpha). ... Continue Reading
1. Inona no atao hoe Palmitoylethanolamide (PEA)? Palmitoylethanolamide (PEA) antsoina koa hoe N-2 hydroxyethyl palmitamide na palmitoylethanolamine dia simika iray ao anatin'ny vondrona amida amida matavy. Izy io dia lipida mihetsika biolojika, mandeha ho azy izay miasa amin'ny CR2 (receptor cannabinoid) ary mifanerasera amin'ny sela mamaivay ao amin'ny rafi-pitabatabana. Ny fanampiana Palmitoylethanolamide dia voaporofo fa manana… Continue Reading
Raha eo amin'ny tsenan'ny hormonina steroid ianao, dia azo antoka fa hahita ny fanampin-tsakafo Dehydroepiandrolone (DHEA). Ny DHEA dia voajanahary voajanahary ao amin'ny vatantsika ary afaka mitana andraikitra lehibe. Ny asany dia nodinihina betsaka mba hamaritana ny mety ho fanasitranana azy amin'ny aretina isan-karazany. Ireo izay mahalala… Continue Reading
Olona an-tapitrisany any no mandany vola be amin'ny vokatra anti-anti-agea toy ny Nicotinamide Riboside chloride. Na dia fizotry ny natiora aza ny fahanterana dia tsy te ho antitra fotsiny ny olona. Ny vaovao tsara dia hoe, misy vokatra marobe eto izay mety hanampy azy amin'izany ary ny Nicotinamide Riboside Chloride dia iray amin'ireo… Continue Reading
Ny atao hoe Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) Glycine Propionyl-L-Carnitine dia manondro ny karazam-borona mifamatotra molekiola ao amin'ny propionyl-L-carnitine sy ny glycine asidra amine. Izy io dia voakilasy ao amin'ny fianakaviana mitovy amin'ny Carnitine ary tena ilaina amin'ny fananganana ny Creatine. Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) dia miasa amin'ny maha antioksidaina azy, ary vokatr'izany dia ady mahery vaika manohitra ny radika maimaim-poana koa… Continue Reading
Cetilistat ho an'ny fitsaboana ny obes: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra
Inona no atao hoe Cetilistat Cetilistat, fantatra ihany koa amin'ny marika marika Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat no zava-mahadomelina vaovao mampihena ny lanjantsika eo amin'ny talantalana. Novolavolain'i Alizyme, orinasa biofarmasiona, miaraka amin'ny pharmaceutika Takeda. Cetilistat (282526-98-1) dia mbola raisina ho zava-mahadomelina andrana satria mbola mitohy hatrany ny fikarohana momba izany any Eropa, Japon, ny… Continue Reading
Ny antidepresant mahery indrindra: Tianeptine Sodium
Ny atao hoe Sodium Tianeptine Sodium Tianeptine sodium dia fanafody ampiasain'ny mpampiasa hitantanana ny fahaketrahana. Na dia mbola nankatoavina aza ny fampiasana ny zava-mahadomelina any Etazonia amin'ny alàlan'ny fitantanan-draharahan'ny sakafo sy ny zava-mahadomelina, dia voaporofo fa antidepressant mahery vaika io. Ny sodium tianeptine amidy dia mora hita amin'ny isan-karazany… Continue Reading
Phenibut manohitra ny fanahiana: Azo antoka ve ny fampiasana azy?
Phenibut Overview Phenibut supplement dia nipoitra tany Rosia, izay ampiasaina hanamaivanana ny fepetra isan-karazany izay misy ny tsy fahitan-tory, ny fahaketrahana, ny tsy fahampian'ny saina, ny fikorontanan-tsaina, ny tebiteby, ny tetika ary ny fiakanjoana. Ny mahasamihafa azy amin'ny fanafody hafa dia ny amidy azy ho toy ny fanafody nootropic: midika izany fa ilaina amin'ny fanatsarana… Continue Reading
Pramiracetam | Ny famoahana fametram-pivelomana Nootropics tsara indrindra Cognitive
What Is Pramiracetam Pramiracetam, fantatra ihany koa amin'ny hoe Pramistar, dia ny enhancer kognitive izay mamela ny atidohanao hanao fomba tsara indrindra. Pramiracetam nootropics dia racetam izay amboarina avy amin'ny piracetam. Izany dia mitranga amin'ny alàlan'ny fanoloana ny vondrona amide hita ao amin'ny piracetam miaraka amina vondrona etil dipropan-2-ylamino. Ny fanoloana no mahatonga an'i Pramiracetam hanana… Continue Reading